Dab xalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaal magaalada Jowhar – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dab xalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaal magaalada Jowhar
Dab xalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaal magaalada Jowhar
– Goobo ganacsi oo ku yaal suuqa ugu wayn magaalada Jowhar ayaa gabi ahaanba gubtay, kadib markii xalay uu dab qabsaday.
Kusimaha guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Maxamed Cabdi Sheekh iyo duqa magaalada Jowhar Saalax Muudeey Cali iyo mas’uuliyiin kale ayaa tagay dhismaha uu dabku ka kacay oo ah guri ay leeyhiin qoys caan ka ah magaalada Jowhar.
Dabkan oo aan illaa iyo hadda si rasmi ah aan loo ogayn sababta keentay ayaa waxaa ku gubtay dhammaan hantidii tiil goobahaas ganacsi oo isugu jirtey baqaarro lagu iibiyo qalabka dhismaha,farmashiyaal jumlo iyo tafaariiq ah,dukaan lagu iibiyo dahabka iyo dukaan lagu iibiyo bagaashka.
Dadaal ay sameeyeen dadka ganacsatada iyo dadka deriska la ah dhismaha dabka qabsaday ayaa suurtogelisay in laga soo badbaadiyo qoys degenaa dhismaha uu dabku qabsaday,hase yeeshee waxaa gubtay dhammaan wixii hanta ay lahaayeen qoyska oo yiil guriga.
Ugu dambayntii waxaa lagu guulaystay daminta dabka iyadoo mid ka mid ah dabdamisyada magaalada Jowhar uu qayb wayn ka qaatay daminta dabka.